Wasiirka Boostada Soomaaliya oo booqday xafiiska IGAD ee Jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Boostada Soomaaliya oo booqday xafiiska IGAD ee Jabuuti
6th June 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Posted on June 6, 2016 by Mustaf Mohamed inWARARKA // 0 Comments
Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Soomaaliya Mudane Maxamed Jamac Mursal (Geelle) oo safar shaqo ku jooga dalka Jabuuti, ayaa maanta galinkii hore ku booqdey Xafiiskiisa, Xoghayaha Guud ee urur Goboleedka IGAD Amb. Maxbuub Macalin Maxamed oo si diiran u soo dhaweeyey wasiirka iyo wafdigiisa.
Wasiir Geelle oo uu weheliyo agaasimaha Guud ee wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta mudane Axmed Xaaji Cabdi,ayaa soo dhaweyn ka dib waxuu Amb. Maxbuub uga mahadceliyay wasiirku inuu soo booqda Xafiiska IGAD isagoo wasiir ah.
” Waxaan ku faraxsanahay xilka cusub ee Geelle loo magacaabay isagoo urur goboleedka IGAD kala soo shaqeeyey la talinta dhanka Siyaasadda iyo sameynta maamul goboleedyada Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya way ku mahadsan tahay in garwaaqsatay dadka xirfadda leh iyo kartida iney u magacawdo Xilal wasiirnimo.” Ayuu yiri Amb. Maxbuub oo Xafiiskiisa kula hadlay saxaafadda.
Wasiirka ayaa isna dhankiisa u mahadceliyay urur goboleedka IGAD kaalinta ay ka qaadanayaan dib u dhiska Soomaaliya waxuuna wasiirku codsadey in IGAD ay wasaaradda ka caawiso hormarinta adeegga Isgaarsiinta casriga ee dalka Soomaaliya.
Ciidamada Ammaanka oo soo qab qabtay Askar AMISOM ka tirsan oo Saadkooda Iibsanayay
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo gaaray xerada Dhadhaab